Izifo Knott sika: Izimbangela, Izimpawu, zokwelapha
Lesi sifo yaziwa nangokuthi umsipha constrictive futhi imele isimo lapho omunye iminwe unesikhundla njalo flexed. Lapho eqondisa, wenza umsindo Snapping, like a shot. Ngakho, igama evame kakhulu yokusebenzisa isifo - a syndrome iphumele ekhuluma ngeminwe yakhe.
isifo Knott sika sitholakale lapho ukuvuvukala uncipha ngenxa isikhala ngaphansi igobolondo umsipha ezizungezile. Ezimweni ezimbi kakhulu, umunwe uzimisele.
Uma umsebenzi wakho noma ukuzilibazisa zidinga amaningi ukuphindaphinda Snapping okuphindayo ingalo ukunyakaza, wena basengozini. Ngokuvamile lesi sifo sithinta abantu besifazane kanye abanesifo sikashukela zabo bobubili ubulili.
Izimpawu zesifo kukhona Knott kanjani ezincane noma okunzima. Phakathi kwabo:
Baxhashazwe nokuqina emalungeni, ikakhulukazi ekuseni.
Ukuchofoza umsindo noma chofoza umuzwa ngesikhathi Flick umunwe.
Ukuthamba noma Bump (lezimpande eziguqula i) entendeni ngasesinqeni se umunwe lesiguli.
Ngezikhathi, kusuka kube nzima kakhulu qondanisa umunwe, kodwa ngemva kwesikhathi esithile waphinde unbent angesabi, kungakhathaliseki inani kanye ukushuba imizamo qondanisa.
isifo Knott ngokuvamile kuthinta omkhulu, maphakathi noma indandatho umunwe. Ngezinye izikhathi isifo ukuba iminwe eziningana noma kokubili izandla. emizweni ezingajabulisi esibhekana nazo obonakalayo ikakhulukazi ekuseni, uma uzama ukuqondisa umunwe noma kunzima ngawakhamela into.
Uma uqaphela imincele ukunyakaza noma ukuqina emalungeni iminwe, wazise uchwepheshe ukuthi ihlaziye izimpawu futhi wenza behlolwa yesandla sakho. Uma Ilunga kulapho elikhanyayo futhi azizwa ashisayo kuya touch, kungase kudingeke usizo lwezokwelapha esiphuthumayo, njengoba izimpawu ezibalwe abonisa ngegciwane.
Imisipha - kungcono izakhiwo fibrous ukuthi ukuxhuma imisipha ukuba amathambo. umsipha ngamunye lizungezwe emgodleni zokuzivikela. umsipha Constrictive kutholakala ukuthi uphethwe yini lapho lokhu emgodleni ku umsipha umunwe kuyinto acasuke futhi avuvukele. Izinqubo umonakala uphazamise umsipha ukunyakaza evamile ngaphansi igobolondo.
ukucasuka isikhathi eside e-umsipha containment kungaholela nezibazi futhi ukuqina isakhiwo ukwakha uhlevane (Izigaxana), nakakhulu zithikameze ukusebenza evamile umsipha.
Izimo ukuthi kwandisa ingozi yokungenwa nokuthuthukisa lesi sifo uNott zihlanganisa:
Siyaphindaphinda ukunyakaza ukuziqonda. Imisebenzi nokuzilibazisa ezidinga phinda ukunyakaza efanayo neminwe, ngokuvamile iholela ligamentitu constrictive.
izinkinga zempilo ezithile. Iziguli sikashukela noma i-rheumatoid arthritis basengozini.
UPawulu. Ngokuvamile, isifo Knott sika uxilongwe kwabesifazane.
Ukuze uthole ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe esekelwe izimpawu futhi behlolwa uzodinga ukubhekana kudokotela wendawo noma kwangasese.
Ngaphambi kokuya emtholampilo noma isikhungo sezokwelapha kuyinto efiselekayo ukwenza uhlu ovame izithasiselo ukudla izidakamizwa. Can ibe-pre-eqoshiwe kanye nezindaba eliyinhloko ofuna ukucela udokotela wakho, njenge:
Ingabe lo umkhuhlane zesikhashana?
Yingakho kukhona izimpawu?
Lesi sifo ingelapheka Knott?
Kungakhathaliseki yezinkinga ezingavela ngenxa ukuphathwa zikadokotela?
Udokotela futhi ngeke ukukubuza imibuzo embalwa hlandla. Zilungiselele ukuyiphendula, ukutshela uchwepheshe lonke ulwazi ebaluleke kakhulu. Udokotela kungenzeka ube nentshisekelo izingxenye ezilandelayo:
Yiziphi izimpawu ingabe nizithola nimane?
uye waphawula isikhathi esingakanani izimpawu zokugula Knott?
Izimpawu avele ngezikhathi ezithile noma unomphela?
kungakhathaliseki ukuthi isimo sibe ngcono noma eziya ziba zimbi ukubhekana nesimo sakho ngempumelelo incike ezinye zezici?
Kungakhathaliseki isimo sakho siya siba sibi kakhulu ekuseni noma ngezikhathi ezithile sosuku?
Ingabe wenze okuphindayo isandla ukunyakaza emsebenzini noma ngesikhathi sakhe esikhululekile?
Ingabe abalimalanga isandla muva nje?
Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla kulokhu akudingi izifundo eziyinkimbinkimbi. Udokotela ziyonquma ukucobeka ngesisekelo umlando wezokwelapha kanye behlolwa. On luhlolo, uchwepheshe ngeke akucele ukuba cindezela bese unclench ngenqindi yakhe futhi sihlaziye ezindaweni emizweni ubuhlungu, ukunyakaza bushelelezi futhi imvelo ukuqina kwamalunga. Udokotela futhi ukuhlola isandla uzingela Izigaxa. Uma Kutholwe kwaphakama yinhlama ngenxa stenosis ligamentita, ke izoya kanyekanye ne Swayipha of a ngomunwe ngenxa izimpahla umsipha ethintekile.
Zikhona izindlela eziningi ukuze ayibulale ukuqina amalunga ubuhlungu isici ukubhebhetheka kwalesi sifo njengoba isifo Knott sika. Ukwelashwa olandelanayo amasu noninvasive zihlanganisa:
Ukuphumula. Okungenani 3-4 amasonto kufanele uyeke imisebenzi ezidinga okuphindayo ukuphindaphinda okuyisidina ukunyakaza ukuziqonda.
Welulekela. Non-Intensive ngokomzimba umzimba esisuka ukusiza ukuba babhekane nalesi sifo, kodwa ukuba amise umsebenzi ofanayo emzimbeni kufanele kuphela udokotela.
Ukushisa noma abandayo. Sekuyisikhathi eside abantu abaningi bahlushwa kanjani isifo uNott; ukuphathwa Folk of ngalokhu kugula isebenzisa ice izingcezu entendeni. Nokho, ezinye iziguli, wenze okungaphezu ukusiza efudumele Ukushisa pad, ikakhulukazi uma zikwazi zisebenza isandla ngokushesha ngemva nokuvuka ekuseni.
Iziguli eziningi nge ligamentitom stenotic injected imithi steroid ngqo esivikelo umsipha emgodleni. Ama-steroid kusize ekunciphiseni ukuvuvukala ukubuyisela motor umsebenzi ejwayelekile iminwe. Le ndlela yokwelapha ikufakazele ukuthi kuyaphumelela-90% amacala futhi isetshenziswa emhlabeni. Ngezinye izikhathi ukuze uvikele umphumela edingekayo uphinda umjovo.
Uma isiguli isifo sikashukela, ama ayinamandla ekwelapheni lesi sifo njengoba isifo Knott sika. Ukusebenza kulokhu kubhekwa samuntu elilungile: ngokusebenzisa imbobo encane ngasesinqeni se umunwe udokotela ohlinzayo lesiguli elungisa ingxenye onomfutho ku umsipha containment. Ukusebenza akuthathi isikhathi esiningi kuyindlela ephumelela kunazo ulwe sifo iphumele ekhuluma ngeminwe yakhe.
Hip synovitis: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Dysbacteriosis e abadala: ukwelashwa kanye nezimpawu
Hlobo luni isigqoko ezigugile ijazi mink? Sifunda!
Amabhishi angcono kakhulu eCrimea
Izinhlobo inkonzo yomphakathi
Tea uwoyela isihlahla ku warts: izici zohlelo lokusebenza, ukusebenza, kanye nokubuyekeza
Kazan State University of Culture and Ubuciko: incazelo, ikhethelo uphoqe abaneziqu